साना-साना कुरामा रोइहाल्ने मानिसभित्र हुन्छ यस्ता अद्भुत क्षमता ! कतै तपाईमा पनि छ की ? « गोर्खाली खबर डटकम
साना-साना कुरामा रोइहाल्ने मानिसभित्र हुन्छ यस्ता अद्भुत क्षमता ! कतै तपाईमा पनि छ की ?
यस पृथ्वीमा जति पनि प्राणीहरुको जन्म भएको हुन्छ तिनीहरु मध्ये मानव मात्र एक यस्तो प्राणी हो जसले आफ्ना मनका भावनाहरुलाई विभिन्न तरिकाले खुलस्त रुपमा प्रकट गर्न सक्छ। तर जब उनीहरु ब्यक्त गर्दछन तब उनीहरुको प्रकट गर्ने तरिका पनि भिन्न हुन्छ।
यदि यो कुरालाई मनोबैज्ञानिक दृष्टिले हेर्ने हो भने स -साना कुरामा रुने मानिसलाई अन्य मानिसको तुलनामा फरक मान्ने गरिन्छ। उनीहरुका अनुसार धेरै रुनु स्वास्थ्यका लागि उत्तम मानिन्छ। धेरै रुने मानिसमा बिशेष गुण समेत हुने गर्छ। त्यसैले रुन मन लागेको बेलामा धित मर्ने गरि रुनुहोस , यी समस्याबाट सजिलै फुत्किन सकिन्छ।चिन्ता र तनाव कम हुन्छ
भावना व्यक्त गर्न सक्षम
एक मजबुत व्यक्तित्वको पहिचान
जब तपाई आफ्नो भावनालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, तब तपाईले आफुले आफुलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुनुहुनेछ। यसका अलावा मनको भावना खुलस्तसंग प्रस्तुत गर्नाले व्यक्तिगत , सामाजिक र व्यवसायिक जीवनमा यसको लाभ प्राप्त हुन्छ। भवनको स्वीकार्यता मष्तिस्कको शान्तिसंग जोडिएको हुन्छ।